Coca-Cola Tet 2014 Baakadaha Cabitaanka Fudud - Joornaalka Naqshadeynta
Baakadaha Cabitaanka Fudud
Axad 11 Bisha Todobaad 2021
Baakadaha Cabitaanka Fudud Si loo abuuro taxane taxaneyaal Coca-Cola ah kuwaas oo ku faafinaya malaayiin reer Tết ah oo ballaaran oo dalka oo dhan ah. Waxaan u adeegsanay astaamaha Tca Coca-Coca sumadda (Swallow Bird) sidii aaladda aan u sameynayno rabitaannadaas. Mid kasta oo ka mid ah wuxuu awood u leeyahay, boqolaal liqitaan oo gacanta lagu soo qaatay ayaa loo habeeyay oo si taxaddar leh loogu habeeyey qoraal dhaqameed, kuwaas oo si wada jir ah u sameeya taxane ah himilooyin Vietnamese ah oo macno leh. "An", waxaa loola jeedaa Nabadda. "Tiii" waxaa loola jeedaa Guul, "Lộc" macnaheedu waa barwaaqo. Erayadaas ayaa si weyn loo is weydaarsadaa inta lagu jiro fasaxa, oo dhaqan ahaan loo qurxiyo qurxinta Tết.
Magaca mashruuca : Coca-Cola Tet 2014, Magaca naqshadeeyayaasha : Rice Creative, Magaca macmiilka : Rice Creative.
Naqshadeynta naqshadda maalinta
Naqshadeeyayaasha halyeeyada ah iyo shaqooyinkooda ay ku guuleystaan.
Jimco 9 Bisha Todobaad 2021
Naqshadeynta Legends waa naqshadeeyayaal aad caan u ah oo adduunkayaga ka dhiga meel wanaagsan oo leh nashqadeeyaashooda wanaagsan. Soo ogoow naqshadeeyayaasha halyeeyada ah iyo nashqadeynta wax soo saarkooda cusub, shaqooyinka farshaxanka asalka ah, naqshadaha naqshadaha, naqshadaha moodada iyo istiraatiijiyadaha naqshadeynta. Ku raaxayso oo baadho shaqooyinka naqshadaynta asalka ah ee naqshadeeyayaasha abaalmarinta ku guuleysta, fanaaniinta, naqshadaha, naqshadaha iyo magacyada adduunka oo dhan. Ku dhiirrigeli naqshadaha hal-abuurka leh.
Firo Dab-Damiska Dabka Jimco 23 Bisha Todobaad
Phenotype 002 Jijin Khamiis 22 Bisha Todobaad
Mangata Patisserie Aqoonsiga Muuqaalka Ee Rootida Arbaco 21 Bisha Todobaad
Bisha Shanaad 2021 (93)
Naqshadeynta wareysiga ee maalinta Jimco 23 Bisha Todobaad
Naqshadeynta naqshadda maalinta Khamiis 22 Bisha Todobaad
Naqshadeynta maalinta Arbaco 21 Bisha Todobaad
Naqshadeeyaha maalinta Talaado 20 Bisha Todobaad
Naqshadeynta kooxda maalinta Isniin 19 Bisha Todobaad
Baakadaha Cabitaanka Fudud Rice Creative Coca-Cola Tet 2014